တေလာ Lopes – တေလာ Lopes ツဘလော့
စာရေးသူ: တေလာ Lopes
တေလာ Lopeshttp://taylorlopes.comဂူဂဲလ် +
Git ကိုဘယ်လိုသုံးရမှန်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်, ၎င်းတွင် ပူးပေါင်း၍ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သောဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းပါဝင်သည်.
25 သြဂုတ်လ 2017 တေလာ Lopes	ဌာနခွဲ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်, git, ဆရာ, ပေါင်းစည်းသည်, မော်ဒယ်, လွှတ်ပေးရန်	1 မှတ်ချက်
CTRL + C ကိုအီး CTRL + V ကို entre ကို Windows ကeVM က Linux ကိုအဘယ်သူမျှမရဲ့ Virtual Box ကို
Windows ကို Desktop နဲ့ Debian virtualized အကြား Copy ကူး / Paste အဖြစ်? အဆိုပါသိသာဖြေရှင်းချက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ပါလိမ့်မယ် “ဧည့်ထပ်တိုး” Oracle က VM က VirtualBox ပြုပါ, ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ကအမှား generate လုပ်တဲ့အခါအကြောင်းကို “ဝန်ဆောင်မှုကို set up ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ vboxadd”?
28 ဇူလိုင်လ 2017 တေလာ Lopes	နောက်ထပ် guest ည့်သည်, ctrl + c, ctrl + v, gcc, vboxadd, vboxlinuxadditions, virtual box, vm, ပြတင်းပေါက်	9 မှတ်ချက်များ
Visual Studio က Code ကိုအတွက်အလိုအလျောက်စုစည်းချွေတာ typescript
ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့နှစ်ခုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကြလိမ့်မည်: 1) အမိန့် “tsk” ဒါဟာပေါင်းစည်း terminal ကို VS ကုဒ်အတွက်အသိအမှတ်ပြုမထားဘူး, အီး 2) စုစည်း file ကိုကယ်ဖို့အလိုအလျှောက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး “.TS” (type Script).
14 ဇူလိုင်လ 2017 တေလာ Lopes	angular.js, node.js, TS, tsk, typescript, အမြင်အာရုံစတူဒီယိုကုဒ်, ကုဒ် vs	မှတ်ချက် Leave
modem မှတဆင့် run ဖို့ DDNS Configuring + Router က
အဘယ်သူမျှမ-IP နဲ့ DynDNS မေ့လျော့တော်! သင့် router အလုပ်တံတား mode မှာ Make နှင့် DNS-O-MATIC နှင့်အတူ DDNS configure.
28 ဇန္နဝါရီလ 2017 တေလာ Lopes	ကွောကျသော, Asus, တံတား, ddns, DNS-o-MATIC, dnsomatic, dyndns, freedns, modem, နတ်, အဘယ်သူမျှမ-ip, Router က, ကို technicolor	4 မှတ်ချက်များ
VirtualBox ထဲတွင် disk အရွယ်အစားကိုတိုးပါ
Windows ကနေ 10, virtualized Ubuntu Linux disk ကိုဘယ်လိုတိုးချဲ့မလဲ (.vdi) usando Oracle က VM ကို VirtualBox? ဘယ်လောက်ဝင်ကြည့်ပါ2ခြေလှမ်းများ!
11 ဒီဇင်ဘာလ 2016 တေလာ Lopes	disk ကိုတိုးမြှင့်, အာကာသတိုးမြှင့်, ချစ်တယ်, hd ကို, ပြုပြင်ရေး, ubuntu, vb, vboxmanage, vdi, virtualbox, vm	21 မှတ်ချက်များ
WordPress ကို: .htaccess အားဖြင့် directory ကို URL ကိုပြန်ရေးရန်စည်းကမ်းကိုဖယ်ရှား
မည်သို့တိုက်ရိုက် WordPress ကို hosting server ကိုအမြစ်မှာ directory ကိုဝင်ရောက်ဖို့တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီး URL ကိုအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်?
7 ဒီဇင်ဘာလ 2016 တေလာ Lopes	htaccess, htdocs, ပြန်လည်ရေးသား, url ကိုဖော်ရွေ, Wampserver, wordpress, www, Xampp	မှတ်ချက် Leave
Ubuntu တွင် Java ကိုထည့်သွင်းပါသို့မဟုတ်မွမ်းမံပါ
Ubuntu တွင် Java ကိုရိုးရာနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းဖြင့်ထည့်သွင်းလိုသည်4အဆင့်များ? ဒီမှာ third party repositories ကိုအသုံးမပြုဘဲလုပ်ရန်အမြန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်.
19 နိုဝင်ဘာလ 2016 တေလာ Lopes	နောက်ဆုံးသတင်း, install လုပ်ပါ, java, Linux ကို, ubuntu, နောက်ဆုံးသတင်း	မှတ်ချက် Leave
တယောက်က FTP com FileZilla Server ကိုအီးက Windows ကနေတဆင့်, HD7ထို Post ကိုအတွက်အကျိုးစီးပွားကြောင့် "FTP ကနေတဆင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်၏ HD ရရှိနိုင်ပါစေ", ငါသည်သင်တို့၏ HD ကို compatilhar နှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မည်သည့်ကွန်ပျူတာကနေလက်လှမ်းစေရန်တစ်ဦးတယောက်က FTP server ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ခြေလှမ်းဖြင့်ခြေလှမ်းကိုဖန်ဆင်း (ပြည့်စုံသော!). Int...
သင့်ရဲ့ Zend PHP ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန်မည်သို့ ငါ Zend Certified PHP ကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်ရပြုမည်သို့တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်နှင့်ကျိုးနွံအကောင့် - ZCPE. Introdução A ideia não é falar sobre as vantagens (သို့မဟုတ်မ) တစ်ဦးလက်မှတ်ရှိခြင်း. ကိုယ့်ကိုငါ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေချင်, အရာမှထွက်ကူညီစေခြင်းငှါ ...
Composer မပါဘဲ mPDF ကိုတပ်ဆင်ပါ – PHP ကိုအတူ PDF ကိုအစီရင်ခံစာများ အဆိုပါ mPDF အနိမ့်သင်ယူမှုကွေးနဲ့အတူ CSS ကို / HTML ကိုကနေ PDF ကိုထုတ်ပေး. ဒီမှာစိတ်ကူးက composer ကို server ပေါ်မှာ install လုပ်စရာမလိုပဲ mPDF ကိုလုပ်ဖို့ပါ. တေးရေးဆရာသည်ဒေသအလိုက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဆာဗာသို့ပေးပို့မည်. အထူးဂရုပြုရန်: မင်းဆိုရင် ...
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.110.665 ဝင်ရောက်ခွင့်